Maarso 27, 2012
Awoodda uu shilin-Soomaaligu ku yeeshay suuqyada aan rasmiga ahayn ee lagu kala sarrifo lacagaha bilihii dhowrka ahaa ee la soo dhaafay ayaa khalkhal galiyay nolosha dad badan oo ku nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Soomaali kor u haysa shilin-Soomaali duugoobay xilli iyaga oo Muqdisho ku sugan ay ka mudaaharaadayeen sicir-barar aad u sarreeya bishii May 2008-dii, dhibaatadaa oo illaa haatan taagan. [Mustafa Abdi/AFP]
Falanqeeyayaal: Al-Shabaab way la jahawareersan tahay arrinka al-Amriki
Toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa hoos u dhac 30% ah waxa uu la soo guboonaaday qiimaha lagu sarrifo lacagta doollarka ah, iyada oo aan wax isbaddal ahi ku imaan qimaha lagu kala iibsado maciishadda quutul-daruuriga ah. Arrintan ayaa walaac ku abuurtay dadka ku nool Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku tiirsan lacagaha dibadda laga soo diro.
“Waxaannu ka cabaneynaa qiimihii doollarka oo aad hoos ugu dhacay, iyo qiimihii maciishada oo halkeedii taagan,” ayuu Sabahi ku yiri Xasan Xaaji oo 45 jir ah kuna nool magaalada Muqdisho. “Tani waxay saamayn weyn ku yeelatay nolosha danyarta soomaaliyeed ee ku tiirsan biilasha dibadda looga soo diro.” Markii ay burburtay xukuumaddii dhexe 1991-kii, waxaa sidoo kale dumay Bangigii Dhexe ee Soomaaliya iyo guud ahaan nidaamkii bangiyada . Wixii intaa ka dambeeyay, dawladda Puntland iyo tan Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo saara lacagta shilin-Soomaaliga, halka Somaliland ay soo saarto lacag iyada u gaar ah.
Inkasta oo Bangigii Dhexe dib loo furay 2009-kii, heerka sarrifka lacagaha waxaa caadiyan xukuma gaddislayda. Shillin Soomaaliga laguma kala gaddisto suuqyada caalamiga ah, sidaa darteed heerka sarrifku waa uu sabbeeyaa inkasta oo uu doollarku in dhawaalabaha dagganaa.
Hoos u dhaca ku yimid qiimaha lagu sarrifo doollarka ayaa saameeyay awoodda gadashada iyo dhaq-dhaqaaqyada dhaqaale sida uu qabo Maxamed Sahal oo ah 38-jir ka ganacsada sarifka lacagaha.
“Maamlihii la soodhaafay xaalad jahwareer ah ayaa ka jirtay suuqyada sarrifka, sabatoo ah qiimaha lacagta doollarka ayaa aad hoos ugu dhacay” ayuu Sabahi ku yiri. “Boqolkii dollar oo bishii November 2011-kii lagu sarrifayay lacag u dhexeysa 2,600,000 – 2,800,000 oo Shilin Soomaali ah ayaa todobaadkii hore mar qura aad hoos ugu dhacday, waxayna gaartay 1,800,000.”
Lacagta doollarka Maraykanka ayaa aad looga isticmaalaa Soomaaliya oo dhan, waana tan kaliya ee sida sharciga ah ee lagu kala badasho badeeadaha iyo adeegyada.
Asalka mushkiladda oo lagu kala aragti duwan yahay
Wasiirka Maaliyadda Puntland Faarax Cali Shire ayaa daalaa-dhaca qiimaha shilinka ee suuqyada sarrifka waxa uu u aaneeyay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay yaraanshaha lacagta shilinka Soomaaliga.
"Waxaa jira qaddiyado badan oo u baahan in aad loo sii darso, laakiin baaxaa-degidda waxa inta badan keena yaraanta daabicidda shilinka iyo waxyaabaha dalka ka soo baxa iyo heerkii nolosha oo soo hagaagaya,” ayuu yiri Shire ka sheegay shir-jaraa’id oo uu qabtay 8-dii March, isagoo inta ku daray in degganaasho la’aantu ay sababtay in sarriflayaashu ay ceshadaan shilinkooda si ay mar kale u sarriftaan. Shire waxa uu sheegay in xawilaadda telefoonnada gacanta ku salaysan oo isticmaalaya doollarka Maraykanka in ay sidoo kale keentay in aan la isticmaalin shilinka.
In badan oo ka mida dadka daggan Muqdisho oo la hadlay Sabahi ayaa ku eedeeyay qiima-dhaca ku yimid shilinka iyo waxtarkiisiiba ganacsatada iyo sarriflayaasha.
“Jaangoynta qiimaha doollarka waxaa gacanta ku haya sarriflayaasha, mana ka fikiraan danta maatada iyo danyarta,” ayuu yiri Axmed Jimcaale oo 52-jir ah, ahna oday ku nool Muqdisho. “Taa baddalkeeda waxa ay kaliya eegayaan dantooda gaarka ah.”
“Cidna lama xisaabtanto ganacsatada. Raashinki qaali ayey ka dhigeen, qiimihi doollar kana hoos ayey u dhigeen,” ayuu yiri.
Sahal ayaa waxa uu ku dooday in eedda loo soo jeedinayo sariflayaasha ayan lahay wax sal ah.
“Innagu ma xukunno sarrifka hadduu kacaayo iyo haddii uu dhacayo toona. Arrintaan waxaa keenay Mucaawinooyinka iyo lacaggaha doollarka ah ee faraha badan ee dalka soo galay bilihii lasoo dhaafay, taas oo hoos u ridday qiimaha doollarka,” ayuu yiri Sahal.
Shilin cusub oo la daabacay
Dawladda Federaalka KMG ee Soomaaliya iyo dawladda Puntland ayaa bishan shaaciyay in ay daabacayaan lacag cusub oo shilin-Soomaali ah taasoo ka koobnaan doonta lix warqadood oo u dhexeeya 1,000 illaa 50,000 oo shilin. Xilligan, lacag-Soomaaliga kaliya ee la isticmaalo waa waraaqda 1,000-ka shilin.
Wasiirka Maaliyadda ee Dawladda Federaalka KMG ee Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed ayaa dhawaan booqday dalka Sudan, halkaa oo lagu daabacayo lacagta. Waxa uu saxaafadda u sheegay in lacagta la daabacay oo ay kaliya sugayso in la soo raro. Soomaaliya iyo Suudaan ayaa ku heshiiyay daabacaadda lacata 2010-kii.
Cabdullaahi Afrax, oo ah xubin ka tirsan guddi-hoosaadka lacagta ee barlamaanka, isla markaana ahaa wasiirkii hore ee Ganacsiga DFKMG ah ayaa sheegay in daabacaadda lacagta cusub ayan ahan xalka qura ee mushkiladda. “Dowladdu kama taliso xilligaan dhammaan goballada dalka. Marka lacag cusub la keenayana waa in ay jirtaa awood lagu meel marin karo, lacagta cusubi waa in ay noqotaa lacag waddanka oo dhan ka shaqeyneysa” ayuu Afrax ku yiri sabahi.
“Waxa ay ila tahay arintaas in lagu deg-degay sabab la’aan,” ayuu yiri. “Waa in marka hore la balaariyaa awoodda dowlada oo la-xoreeyaa dhammaan goballada hadda gacanta al-Shabaab ku harsan. Lacag aan ka shaqeyn karin Afgooye iyo Balcad in hadda lakeeno dalka waxba uma sooma kordhineyso. Bal, waxaa laga yaabaa in ay abuurto sicir-barar cusub oo dalka ka dilaaca.”
Daganaansha la’aanta qiimaha sarrifka
Sicir-bararka iyo qiima-jabka ku yimaada shilin-Soomaaliga waxa ay saamayn taban ku yeelan karaan nolasha Soomaalida. Shilinka oo la waqiima sicir-bararka dartii waxa ay ka dhigan tahay in ay yaraadaan waxa uu shilinku soo goyn karo, ganacsatuduna waa ay ka caga-jiidayaan in ay aqbalaan shilinkaas. Qiimaha Shilinka oo xoogaystana waxa ay ka dhigan tahay in lacagaha ay soo diraan Soomaalida qurbaha ku nool in ayan waxba goyn.
“Dadka Soomaaliyeed intooda badan waxa ay ku tiirsanyihiin biilasha dibada looga soo diro,” ayuu yiri Maxamed Daahir, oo ka tirsan dadka deggan Muqdisho. “Marka haddii boqol-kii doollar ee dibada laga soo dirayay qiimeheedii uu marayo 2 milyan iyo wax lamid ah, qiimihii maciishadana uu halkiisii taagan-yahay waxaa muuqata in ay saamayn xun ku yeelaanayso nolasha daka kku tiirsan xawilaadda.” “Hoos u dhaca qiimaha doollarka wal-wal weyn ayuu nagu hayaa, maxaa yeelay maciishaddii quutul- daruuriga halkeedii ayey taagan tahay, taasna nolosha qoysas badan ayey halis gelineysaa”.
Todobaadyadii la soo dhaafay, sarrifka $100 waxa uu Muqdisho ka ahaa 1.8 milyan shilin, halka uu meelaha kalena ka ahaa 1.7 milyan shilin.
Faadumo Axmed oo ah hooyada toddoba caruur ah oo Muqdisho kula nool ninkeeda oo aan haysan shaqo la isku hallayn karo ayaa Sabahi u sheegtay in ay walaalaheed dibadda ku nool u soo diraan $100. “Arintaan qiima dhaca doollarka saameyn weyn ayay nagu yeelatay, maxaa yeelay lacagtii wax ma tareyso, wax yar ayaa laguugu sarrifayaa. Raashinku waa qaali isagana. Maanta qof kii dibada laga soo biilo oo qaadanaya boqol dollar oo raba inuu guri kiradiis isaga bixiyo, raashinna ka soo iibsado, waad dareemi kartaan culeyska heysta,” ayay tiri. “Marka aan ka bixiyo lacagta iskuulka iyo tan kirada gurigga, inta soo hartay kuma filna nolosha qoykeena,” ayay tiri.
Siyaasadda dhaqaalaha waxa ay ku jirtaa gacanta xukuumadda Soomaaliya
Sida ay qabaan khubaro dhinaca dhaqaalaha ah oo ku sugan Muqdisho, hoos u dhaca ku yimid qiimaha lagu kala sarifto lacagaha waxa ka qayb-qaatay doollarka Soomaaliya ka soo galaya hay’adaha iyo shaqaalaha gargaarka, kuwaasoo aan soo marin Bangiga Dhexe.
Maxamed Xasan Doob oo ah dhaqaaleyahan casharro ka bixiya Kulliyadda Dhaqaalaha ee Jaamacadda Muqdisho ayaa Sabahi u sheegay in doollarka ku soo qulqulaya Soomaaliya isaga oo aan soo marayn Bangiga Dhexe uu keeni karo in uu qalalaase la soo darso hannaanka dhaqaale ee dalka.
Doob ayaa ku tilmaamay daggaanaasha la’aanta farqiga u dhexeeya lacagaha ee ka taagan dalka in uu calaamad u yahay sida ay DFKMG ahi ugu guul-darraysatay in ay dalka u dajiso hannaan dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo micno leh.
“Dowlada arrintaan xil weyn baa ka saaran waana in ay degdeg u soo faraggelisaa, lana-timaado siyaad dhaqaale oo arrintaan wax looga qabanyo. Doollarka ay hay’aduhu jeebabaka ku wataana loo soo marsiiyaa Bangiga Dhexe,” ayuu ku dooday Doob. “Wasaarada Maaliyadda iyo hey’adaha dhaqaalaha ee dowladda waa in ay qorshe cad ka soo saaraan arintaan, si loo badbaadiyo nolosha shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato kale oo dhanka abaaraha iyo macluusha ah la-daalaa dhacayay,” ayuu yiri.
Afrax ayaa Sabahi u sheegay in guddi-hoosaadka maaliyada ee barlamaanku uu arrintaa iska arkay.
“Guddiga maaliyada baarlamaanku arrintaan dhowr mar ayuu ka shiray, talooyin aan is-leenahay waxbay ka tarayaan xallinta mushkilaada arintaan ayaana ka soo saarnay” ayuu yiri. “Guddiga arrintaan aad ayuu falanqeeyay, xukuumadda ayaana u gudbinnay talooyinkii aan soo saarnay. Iyada ayaana looga fadhiyaa in ay ku dhaqaaqdo tallaabooyin wax looga qabanayo arrintaan,” ayuu yiri.
abdirisak ibrahim ali
February 14, 2013 @ 07:55:24AM
anigu aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo mareegtan
August 16, 2012 @ 07:41:27AM
Run ahaanti wan ku faraxsanahay inay dalka joogan wariyeyaal sidaan uu soo bandhigii karaa maqaalkan oo kale iyaagon cidna ku duureyn kun jeer ayaan idiin mahad celinaya
March 28, 2012 @ 04:12:22PM
Lacagta doolarka deeqda ah ee ku soo qulqulaysa Soomaaliya waa in loo gudbiyaa bankiga dhexe si loogu sameeyo bedelaad loo bedelo lacag soomaali. Sida ayba sheegeen guddiga maaliyada baarlamaanka xalka ugu dhow ee lagu joojin karo sicir bararka bulshada kadhaca waa in waa in la xoojiyo shilin Soomaaliga isla markaana la xakameeyaa doollarka ka imaanaya hay'adaha gargaarka, oo wali ku haysta gacmahooda, haddii ay dowlada soo daabacdo lacag cusub uma noqonayso xal sicir bararka, maxaa yeelay dowlada kumeel gaarka ah ma aysan qabsan dhamaan wadanka oo dhan sidaas daraadeed ma maamuli karto soo galintaanka doolarka, mawduuc kale oo mardhow uun gaaray soomaaliya waa nidaamka banginga taleefoonnada gacanta. Xalku waa in laxiraa nidaamka banigaga taleefoonka gacanta illaa ay dowladu ay gacanta kaga dhigto dhamaan wadanka oo dhan. In labixiyo deeqo badan kana yimid hay ado gargaar oo kala duwan si ay u tiriso soo daadashada lacagta doolaarka. in la joojiyo daabacaadda lacagta cusub ee hadda dawladda loo sameeynayo ee lagu daabacayo warshada lacagta samaysa ee kutaala khartuum, Sudan. Dowlada kumeel gaarka ah kaliya ayaa xaq u leeh in ay soo daabacdo lacagta ay u rabto dalka, ee sax maaha in ay soo daabaacaan maamullada hoose sida Puntland oo ah xarunta burcad-badeedda Soomaalida.